Amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni: kusuka eTokyo kuya eToronto | Izindaba Zokuhamba
Amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni anqunywe ngocwaningo olwenziwe yi-Intelligence Unit yephephandaba laseMelika The Economist. Ngenxa yalokhu, abaphathi bayo bafunda ingqikithi yemizi emikhulu engamashumi ayisithupha.
Ngokuphathelene nenye ngayinye, bahlaziya imingcele emine. Esokuqala kwaba yi- ukuphepha kwedijithali, okungukuthi, ukufinyelela kwe-Intanethi kwabakhileyo kuyo nokuthi bavuleleke kangakanani ekuhlaselweni yi-cyber. Isici sesibili kwaba impilo nemvelo (ikhwalithi yomoya namanzi, kanye nokuhlanzeka kwemigwaqo yawo). Okwesithathu kugxile ekuvumelaniseni ukuhlela kwasemadolobheni nezakhamizi, okungukuthi, inani le- izindawo zabahamba ngezinyawo noma izindawo eziluhlaza. Ekugcineni, owesine kwaba ubugebengu abahlushwa ubugebengu basemgwaqweni kanye nenkohlakalo yezepolitiki. Uma ufuna ukwazi amagama ala madolobha, sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Amadolobha Ayisithupha Aphephe Emhlabeni: Kusuka eTokyo kuya eToronto
1.1 1.- iTokyo
1.2 2.- iSingapore City
1.3 3.- Osaka, elinye iJapan phakathi kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
1.4 4.- i-Amsterdam
1.5 5. - ISydney, ukumelwa kwe-Australia phakathi kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
1.6 6. - iToronto, idolobha lokuqala laseMelika
Amadolobha Ayisithupha Aphephe Emhlabeni: Kusuka eTokyo kuya eToronto
Kuyathakazelisa ukuthi izindawo ezintathu eziphezulu phakathi kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni zihlala kuwo Amadolobha ase-Asia. Bese kufika owaseYurophu, omunye ovela e-Oceania nomunye ovela e-United States. Kepha, njengoba sithanda ukuhamba futhi sazi okuhle kwedolobha ngalinye, ngaphezu kokukhuluma ngokuphepha kulezi eziyisithupha, sizokukhombisa izikhumbuzo zalo ezivelele kakhulu.
ITokyo Meiji Shrine
Inhlokodolobha yaseJapan isamanje ngoba iMidlalo yama-Olimpiki ibanjelwa lapho. Ngokungangabazeki, labo abayikhethe njengendawo bacabangela ukuphepha kwayo. Kumaphuzu ayi-100 esewonke, awatholile 92. Kepha, uma ivelela okuthile, ingepharamitha ye ukuphepha kwedijithali, ngoba kulokhu ithole amaphuzu angama-94. Idolobha laseJapan belihola lesi sigaba iminyaka eyisithupha. Kepha, uma ubheka lokhu, unqume ukukwazi, sizokukhombisa ezinye zezindawo zalo ezithakazelisa kakhulu.
Kuningi okufanele ubone eTokyo, kepha ungaqala nge Ithempeli laseSensoji nethempeli lamaShinto lika Asakusa, atholakele ndawonye. Ngemuva kwalokho, sikucebisa ukuthi uye endaweni ye- IHarajuku, uzokubonaphi okuyigugu Ithempeli laseMeiji kanye nomgwaqo Omotesando, enezitolo ezikhethekile.
Kepha, uma ufuna ukuba nombono we-panoramic wedolobha, khuphukela kufayela le- UMori Tower, enendawo yokubuka esitezi sayo sama-52 noma e- I-Skytree, ngamamitha angu-634 ukuphakama. Kodwa-ke, okufuna ukwazi kakhulu yi- ITokyo Tower, okufana nombhoshongo wase-Eiffel (lapha sikushiya i-athikili emayelana nalokhu) eyakhelwe ukusebenza njengesikhungo sezokuxhumana ngocingo. Ekugcineni, kuyinto ejwayelekile ukuvakashela iTokyo ebabazekayo Ipaki ye-Ueno, isimanga lapho izimbali ze-cherry ziqhakaza.
2.- iSingapore City
Leli elinye idolobha lase-Asia likleliswe endaweni yesibili ekuklelisweni kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni. Ngokuqondile, ithole lesi sikhundla ngengqalasizinda yaso futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuthola i- ubugebengu obuphansi. Eqinisweni, inezinga lobugebengu eliphansi kunawo wonke emhlabeni.
Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukuyivakashela, sincoma ukuthi uye kufayela le- izingadi ethekwini, isimanga sesimanjemanje. Futhi nokuthi usondela kakhulu I-India encane, indawo okuhlala kuyo lo mphakathi futhi onamathempeli amaningi amaBuddha.
Ngakolunye uhlangothi, isakhiwo sokwakhiwa kwe- I-Marina Bay Sands Ingenye yezimpawu zedolobha, nemibhoshongo yalo emithathu nengxenyekazi yayo engenhla elingisa umkhumbi. Eduze kwayo kunodumo Isifanekiso se-merlion park.
Ekugcineni, ungakhohlwa ukuvakashela indawo I-Clarke Quay, enezindlu zayo ezimibalabala. Noma, uma sikhuluma ngalokhu, akufanele uphuthelwe I-Peranakan Terrace. Futhi, eduze kwalezi zindawo, iya eChinatown, lapho kukhona khona ithempeli ISri Mariamman, omdala kunabo bonke edolobheni.
3.- Osaka, elinye iJapan phakathi kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
Indawo yesithathu kulesi sigaba kuhlala elinye idolobha laseJapan, elisho okuningi mayelana nelizwe elibizwa ngeRising Sun. Ngaphansi kokubukeka kunesiphithiphithi, idolobha lesithathu ngobukhulu eJapan livelele ngamaphuzu we 90,9 kwezingu-100. Phakathi kwezici ezine esakutshela ukuthi zihlaziyiwe, i-Osaka ithola isilinganiso sayo esihle kunawo wonke wekhwalithi yenhlanzeko nemvelo.
Kepha futhi kuningi ongakubona edolobheni eliyisiqhingi laseHonsu. Itshe lesikhumbuzo salo liyisimangaliso isigodlo osaka, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX nangaphakathi lapho kukhona khona umnyuziyamu. Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukuthola umbono wedolobha, ungakhuphukela kufayela le- Tsutenkaku tower, Amamitha ayi-103 ukuphakama futhi atholakala endaweni eyingqayizivele ye- Shinsekai, lapho ungabona khona nethempeli UShitennoji.
Ngokufanayo, uma uthanda ama-aquariums, lowo ose-Osaka ungenye yezindawo ezinkulu kakhulu emhlabeni. Inezinhlobo ezihlukene ezingama-620 ezisatshalaliswa emathangini ayi-14. Ekugcineni, ungashiyi idolobha ngaphandle kokuzama isidlo esidume ngaso: the okonomiyaki, okuvame ukuqhathaniswa ne-pizza noma ama-pancake.
Bekufanele silinde indawo yesine ukubona idolobha lokuqala laseYurophu kulolu hlu. Endabeni yalokho okuthiwa yiVenice yaseNyakatho, ithole Amaphuzu we-88 kokungu-100. Kepha kugqame kakhulu, ikakhulukazi ikhwalithi yezinsizakalo zayo zokuhlanzeka kanye nezemvelo, kanye nokuba sobala kohlelo lwayo lwezepolitiki.
Singakutshela okuncane ngalokho okufanele ukubone e-Amsterdam ongazi ngaphambili. Idolobha laseDashi lingesinye sezivakashelwa kakhulu yizokuvakasha kulo lonke elaseYurophu futhi linamasayithi amaningana, njengawo iziteshi noma i Isifunda selambu elibomvu, ibalwe phakathi kwezidume kakhulu emhlabeni.
Kodwa-ke, kufanele sisho ezinye zezikhumbuzo zalo. Ngemuva kokuba nekhofi endaweni yalo engathandeki kangako izitolo zekhofi, ungavakashela i- UHortus Botanicus, enye yezingadi ezindala kunazo zonke emhlabeni. Kufanele futhi ubone ifayela le- Indlu ka-Anne Frank, uphawu lokulwa nobuqaba bamaNazi, oluguqulwe lwaba isigcinamagugu.
Kepha, uma sikhuluma ngalokhu, okudume kakhulu e-Amsterdam yi Rijksmuseum, etholakala ebuhleni I-Royal Palace kusuka eDam Square (lapho kukhona neSonto lamaGothi lase Neuwe Kerk) futhi yathathwa njengenye yemibukiso yobuciko ebaluleke kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokukhohlwa Concertgebouw, ihholo lekhonsathi elifakwe esakhiweni esihle se-neoclassical.
5. - ISydney, ukumelwa kwe-Australia phakathi kwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
Idolobha elikhulu kunawo wonke e-Australia ngosayizi nesibalo sabantu livezwe kuleli zinga ngezizathu eziningana. Kepha eyinhloko ibhekise kweyakhe ukukhathazeka kwemvelo. Ukuthuthuka kwayo kuhlelwe ngenhlonipho enkulu ngemvelo, kokubili ngokuhlelwa kwayo emadolobheni kanye nobuningi bezindawo eziluhlaza.
Uma uthathe isinqumo sokuvakashela eSydney, sikukwazisa ukuthi uqale ngokunembile emapaki anjenge Olimpiki, the I-Centenario noma i Hyde Park, kanye ne- by Izingadi zaseRoyal Botanic futhi i I-Taronga Zoo. Ungajabulela futhi okuhle amabhishi afana noManly noma iBondi.
Ngokuqondene nezikhumbuzo zayo, i- i-cathedral yesanta maria, igugu lesitayela se-neo-gothic; i sydney bay ibhuloho, yethulwa ngo-1932 futhi engaphezulu kwekhilomitha ubude; i Indlu Yezempi, isihlalo sikaHulumeni Jikelele wase-Australia, noma esidumile Opera House, uphawu lomuzi olwandle.
Ekugcineni, sincoma ukuthi uvakashele izindawo ezifana Amatshe, amadala kunawo wonke edolobheni futhi agcwele izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela nezitolo; eyodwa ye Paddington, nezindlu zayo ezinesitayela sobuVictoria, noma leyo Chinatown, lapho kwenziwa khona imisebenzi eminingi yamasiko.
6. - iToronto, idolobha lokuqala laseMelika
Ohlwini lwamadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni, iToronto yaseCanada iyiMelika yokuqala. Uthole amaphuzu we 87,8 sibonga ngaphezulu kwe-100 ikakhulu ku- ukuphepha okuhle komuntu siqu nedijithali ukuthi linikeza izakhamizi zalo.
Ngakho-ke, uma uhambela idolobha laseCanada, ungazola ngobugebengu. Ngakho-ke, ungakujabulela ukuvakasha okuhlelwe ukuhlola i IChibi i-Ontario neziqhingi zalo. Phakathi kwalokhu, i- Isiqhingi saseCentre, lapho kunomfanekiso wesikali seToronto yekhulu lama-XNUMX lakuqala.
Kodwa-ke, okuheha kakhulu idolobha yi- I-CN Tower, okungamamitha angama-553 ukuphakama, okuyisakhiwo sesine eside kunazo zonke emhlabeni. Asikho isidingo sokuchaza imibono onayo evela ku- I-Sky Pod, indawo yokubuka engamamitha angama-447 ngaphezu komhlaba wedolobha.
Futhi, kufanele ubone eToronto ukwakhiwa kwe- Town Town endala, yesitayela se-neo-gothic; i UCasa Loma, ebukeka njengenqaba yangenkathi ephakathi; okumangalisayo Isiteshi seNyunyana noma izakhiwo zesimanje kakhulu, kepha ezingekho ngaphansi kangako I-Royal Ontario Museum, ezinikezelwe emlandweni wemvelo, futhi I-galley yezithombe, okuhlala iqoqo lobuciko elikhulu kunawo wonke eCanada.
Sengiphetha, sikukhombisile amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni kucatshangelwa ubugebengu babo obuphansi, kepha nezimo zabo ezinhle zokuphila nokukhathalela kwabo imvelo. Kodwa-ke, singashiya le ndatshana ingaphelele uma singakutshelanga ngezine ezilandela lezo ezishiwo kusigaba. Imayelana ne- Washington, I-Copenhague (lapha unayo i-athikili ekhuluma ngalo muzi), Seoul y Melbourne. Ukuthola iSpanishi sokuqala, kufanele sibuyele emuva endaweni yama-XNUMX, lapho ikhona Madrid ilandelwe ngokushesha Barcelona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Amadolobha ayisithupha aphephe kakhulu emhlabeni
Imvunulo ejwayelekile yaseVenezuela
Ibhishi i-Es Trenc eMallorca